डेलाइट ह्याक Inte चीट्स, एम्बोट, ईएसपी, वालह्याक - गेमप्रोनद्वारा इन्टेल मृत
इंटेल डेलाइट ह्याक द्वारा मरेको
डेलाइटद्वारा मरेको एक परम्परागत "चेस" खेल हो, तर तपाईं कसरी भगवान बन्न सक्नुहुन्छ?
डेलाइटद्वारा मरेको खेल खेल्दा तपाईंको ह्याकको साथ तपाईंको वास्तविक सम्भाव्यता अनलक गर्नुहोस्। आज १-दिन उत्पादन कुञ्जी खरीद गर्नुहोस्!
एक दिन मात्र हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूको लागि पर्याप्त छैन, त्यसैले लामो ह्याक गर्नुहोस्। १ हप्ता उत्पादन कुञ्जी आज खरीद गर्नुहोस्!
यस बिन्दुमा, हामी यहाँ तपाईंलाई गेमप्रोनमा परिवार सम्झन्छौं। आज १ महिनाको उत्पादन कुञ्जी खरीद गर्नुहोस्!
डेलाइट इन्टेल ह्याक मार्फत हाम्रो डेड प्रयोग गरीरहेको यो खेलको साथ आउने सिकारिve कर्भमा पुग्ने सब भन्दा सजिलो तरीका हो। यदि तपाईं खेल पहिलो पटक खोल्दै हुनुहुन्छ भने चिन्ता नलिनुहोस्! डेलाइट होप्लिट ह्याक मार्फत हाम्रो मृत प्रयोग प्रयोग सफलताको ग्यारेन्टी हुनेछ।
डेलाइट इंटेल ह्याक जानकारी द्वारा मरेका
डेलाइटद्वारा मरेको यो लुकाउने र खोज्ने को चरम संस्करण जस्तै हो, यद्यपि यस खेलको हार्नेहरूले दर्दनाक मृत्यु भोग्नुपर्नेछ। जब तपाईं चाहनुहुन्न कि कसैले तपाईंलाई मीट हुकमा झुण्ड्याउँछ र तपाईंलाई ब्वाइ बाहिर जान दिन्छ, डेलाइट इन्टेल ह्याक द्वारा हाम्रो डेड प्रयोग गर्दा तपाईंको उत्तम शर्त हुनेछ। न केवल तपाइँले थाहा पाउनुहुनेछ कि आक्रमण कहाँबाट आउँदैछ, तर त्यहाँ धेरै सुविधाहरू समावेश गरिएका छन् जुन तपाईंलाई प्राय: सबै चोटि पकडबाट उम्कन दिनेछ। डराउने खेल प्रशंसकहरू रमाउँदछन्, किनभने अन्तमा तपाईंसँग एक विश्वसनीय ह्याक छ!
प्लेयर र आईटम ईएसपी विकल्पहरू प्रयोग गरेर किलर (वा बचेकाहरू उजागर) बेवास्ता गर्नुहोस्, दुबै दुवैले तपाईंलाई प्लेयरहरू र आईटमहरू (ह्याचहरू, जेनरेटरहरू, आदि) ठोस सतहहरू मार्फत हेर्न दिनुहोस्। दुश्मन जानकारीले तपाईंलाई दूरी र स्वास्थ्य बारहरू बताउँदछ, जबकि DBD Aimbot ले तपाईंलाई घातक बनाउँछ। कौशल जाँच पनि उपस्थित छ!
शत्रु जानकारी (शिविरहरू, हत्याराहरू)
उत्तम कौशल जाँच
डेलाइट इंटेल द्वारा मृतको बारेमा
स्ट्रिम मोड एक प्रमुख सुविधाको रूपमा यो ह्याक सक्रिय भएपछि तपाईले चाहानु भएको सबै स्ट्रिम गर्नुहोस्। धोखा इंजेक्शन गर्न आवश्यक हुनेछ, र त्यो एक Discord ओभरले आवाश्यक हुन्छ। यो उपकरण आन्तरिक हो र यसको आफ्नै HWID स्पूफरको साथ आउँदछ, त्यसैले प्रयोगकर्ताहरू जो पहिले हार्डवेयर आईडीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ यस उपकरण प्रयोग गर्न सक्दछ यस वरिपरि जानको लागि। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ सुरक्षा र एन्टि भाइरस असक्षम गर्नुहोस्! यो नगरी, ह्याक झूटा फ्ल्याग हुन सक्छ र राम्रोसँग कार्य गर्दैन। Intel CPUs द्वारा कडाईका साथ प्रयोग गर्नका लागि विकसित, यो उपकरण अ in्ग्रेजीमा आउँदछ र तपाईंको पूरा दृष्टिकोण डेडलाईटद्वारा डेडमा परिवर्तन गर्दछ।
अन्य प्रदायकहरूमा डेलाइट इंटेल द्वारा मरेकाहरू किन प्रयोग गर्ने
अन्य प्रदायकहरूले गेमप्रोनमा फेला परेको गुणवत्ता वितरण गर्न सक्दैनन्, र त्यो हाम्रो कुनै पनि उपकरणको लागि साँचो हुनेछ। डेलाइट इन्टेल ह्याकद्वारा मरेका प्रत्येक सुविधाहरू छन् औसत DBD प्रयोगकर्ताले उपभोग गर्नुपर्दछ, र त्यस भन्दा माथि अरू केहि बढि। हामी निरन्तर उपकरणहरू अद्यावधिक गर्दैछौं जुन हामीले पहिले नै जारी गरिसकेका छौं, यति फरक पर्दैन कि कसरी खेल "पुरानो" जस्तो देखिन्छ, हाम्रो उपकरणहरू ताजा र जान तयार छन्। त्यहाँ किन हाम्रा सबै प्रयोगकर्ताहरू गेमप्रन उपकरणहरू प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध छन् भन्ने कारण छ, र त्यो किनभने हामी सबै भन्दा राम्रो नतिजा प्रदान गर्दछौं - एक उत्पादन कुञ्जीको साथ आफैं परिवारको अंश बन्नुहोस्!
फेरि कहिले पनि तपाईंलाई कारखानाको पूर्वनिर्धारित सेटिंग्स प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछैन जुन एक DBD ​​ह्याकको साथ आउँदछ। हामीले विकास गरेको ह्याकको धेरै बर्षमा सिकेका एक चीज यो हो कि हामी सबैको व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू हुन्छन्, जसको मतलब हामीसँग फरक ह्याक सेटिंग्स हुन्छौं। केहि व्यक्तिले उनीहरूको एफओभ सर्कल ठूलो हुन रुचाउँदछन्, धेरै थोरै ईएसपीहरू अन-स्क्रिनको साथ, जबकि अरूहरू ठूलो एफओभ र सकेसम्म धेरै ईएसपीहरू चाहँदैनन्। जेसुकै अन्य कम्पनीहरूले उनीहरूको DBD धोखाको बारेमा के भनिरहेका छन्, गेमप्रन DBD ह्याक्सको एक मात्र प्रदायक हो जसले एक अनुकूलित इन-खेल मेनू सुविधा दिन्छ। संसार गेमप्रोनको साथ तपाईंको सीप हो!
कसरी चिया सक्षम पार्नु अघि तपाईं कसरी खेल्नुहोस् नोट गर्नुहोस्, र तपाईंले देख्नुहुनेछ यो कती उपयोगी हुन सक्छ। तपाईंको उद्देश्य सँधै पोइन्टमा हुन्छ, र दुश्मनहरू तपाईंको सबै दृष्य आँखाबाट लुक्न सक्दैनन्!
सही काम गर्नुहोस् र आज आफ्नै लागि उत्पादन कुञ्जी खरीद गर्नुहोस्!
गर्न तयार प्रभुत्व जमाउनु डेलाइट इंटेल ह्याक द्वारा हाम्रो मृत साथ?